पत्याउनुहुन्छ ? एउटै घरमा खिचिएको हो 'मन्दिरा'
यो खबरले तपाईहरुलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ, पूरा फिल्म नै एउटै घरमा कसरी खिचियो होला ? यसअघि तपाईहरुले एक फिल्मको छायांकन विभिन्न ठाउँ र देशहरुमा हुने गरेको खबरहरु सुन्दै आइरहेको बेला असार ३ गतेबाट अलनेपाल रिलिज हुन लागेको फिल्म 'मन्दिरा' भने एउटै घरमा खिचिएको हो ।
एउटा घरमा घटेको प्रतिनिधी घटनालाई आधार बनाएर मन्दिरा निर्माण भएका कारण फिल्मको पूरा छायांकन नै एउटै घरमा भएको निर्देशक दीपेश सापकोटाले जानकारी दिए । निर्देशक सापकोटा भन्छन्–‘यो फिल्मको लोकेशन सिमित भएपनि कथावस्तु निकै फराकिलो छ । नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि ‘मन्दिरा’ एउटा प्रयोग पनि हो ।’
भट्ट एन्ड सन्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्ममा जेवी डीसी, नरेन खड्का, प्रवण भुषाल, लक्ष्मी बस्नेत, विना पोख्रेल, विनिता वली लगायतका कलाकारको लिड रोल छ । हरि भट्टले लगानी गरेको यो फिल्ममा उज्ज्वल ढकालको सम्पादन, देव राइको संगीत, सुसन प्रजापतिको छायांकन छ ।